Home Wararka RW Rooble ayaa dusha saartay fashilka Farmaajo mas’uulka ka ahaa
RW Rooble ayaa dusha saartay fashilka Farmaajo mas’uulka ka ahaa
Safarradii RW￼ Rooble ku kala tagay Dalka Qatar iyo magaalada Dhusamareb ee Galmudug wuxuu ku lumiyay kalsoonida Beesha Caalamka iyo tan shacabka Soomaaliyeed sida xamaasadda leh loogu muujiyay:
1dii Maajo 2021 oo ah maalintii Madaxweynaha muddo kororsiga laga diiday Maxamed Cabdullahi Farmajo ku dhawaaqay inuu mas’uuliyadda hogaaminta hirgelinta doorashada barlamaanka federaalka, oo shan (5) bilood dhaafsaneyd waqtigii loogu talagalay, ku wareejiyay RW Roble, isla markaana Ciidammada Badbaadada Qaranka ka baxeen Muqdisho, kuna noqdeen xeryahooda.
1. Dardargelinta hirgelinta doorashada xildhibannada Golaha Shacabka oo 37 Xildhibaan ah iyo ku nuuxnuuxsashada ilaalinta hufnaanta doorashada dhinac kasta;
2. Kormeeridda khasaaraha ballaaran ee ka dhacay Bohol iyo degmada Guriceel halkaaso 4 maalmood ku dagaallamayeen Ciidammada dowladda federaalka oo kaashanaya Ciidammada DG Galmudug iyo xoogagga Ahlu Sunna Wal Jamaaca (ASWJ), isla markaana qaboojiyo xiisadda taagan, dadka dhibaateysan gargaar u fidiyo. Waxaa xusid mudan in inta uusan bilaaban dagaalka Guricel, RW Roble labo mar soo jeediyay in DG Galmudug iyo ASWJ wada hadlaan, haseyeeshe Madaxweyne Qorqor uusan ka hoos qaadin;
3. La kulanka waxgaradka Galmudug si looga wareysto xaaladda guud ee deegaanka, isla markaana la siiyo xogta dhabta ah ee xaaladda guud ee dalka, gaar ahaan arrimaha saameynta weyn ku leh mustaqbalka ummadda deegaanka iyo dib u dhiska dowladnimada Soomaaliya.
“Waxaa wax laga xumaado ah in khilaafka siyaasadeed ee Soomaaliya isu beddelo ama ku dhammaado gacan ka hadal ama dagaal. Muddada u dhexeysa 23 ilaa 26 Oktoobar waxaa Guricel ka dhacay dagaal culus oo dhexmaray ASWJ iyo Ciidammada Galmudug oo taagerayaan Ciidammada dowladda federaalka. Dagaalkaas hubeysan waxaa ka dhashay khasaare ballaaran, barakac baahsan ee shacbka iyo burbur weyn ee ku dhacay dhismayaasha dowladda iyo kuwa dadweynaha gaarka u leeyihiin. Annaga Qaraammada Midoobay ahaan iyo Saaxiibada Caalamka qaarkood waxaan la xiriirnay dhinacyada dagaalamay, kalana hadalnay dhibaatada dhacday, waxaana si adag ugu sheegnay inay joojiyaan colaada, lana raaco dariiqa wada hadalka si wax looga qabto ama xal loogu helo khilaafka siyaasadeed.”
1. In hadalka iyo ficilka RW Rooble is khilaafsan yihiin;
3. In hadallada RW Rooble abuurayaan markasta saluug, fajac, iyo welwel badan;
4. In dhawr mar RW Rooble ku kacay tallaabboyin lagu maadeysto;
5. In RW Rooble laga faafiyay warar ka soo horjeeda muuqal diimeedka uu muujinayo;
6. In safarka RW Rooble ku tagay Qatar ay wax weyn ka beddeshay dhaqankiisa siyaasadeed, dadweynahana shaki badan gelisay;
7. In RW Rooble si buuxda u aqoonsan halista dalka ku jiro oo Farmajo iyo Fahad Yaasin ku rideen 4tii sano ee la soo dhaafay. Waxaa la yaab ah in xukuumadda RW Roble, Wasaaradda Amniga , aysan ka hadlin, dadweynaha u caddeyn u faahfaahin arrinta Drones lagu qabtay Garoonka Diyaaradaha Muqdisho ee Xildhibaan Zakariya Xaaji Cabdi sheeganayo.
8. In RW Rooble doorashada federaalka ka dhigay riwaayad TV laga daawado iyo inuu ku biiray burcad abaabulan (organized criminals) oo magaca dowladda federaalka ugu shaqeysaneysa si sharcidarrada ah danahooda iyo dano ajnabi.